1. Bacdamaa ay Xukuumaddu mas’uul ka tahay jaangoynta siyaasadda, loona baahanyahay in dhammaan hay’adaha dastuuriga ah ay ka wada shaqeeyaan sida ugu habboon ee looga gudbi karo marxallada kala guurka ah, in loo baahanyahay in mowqif mideysan ay dhammaan hay’adaha dastuuriga ah ka wada qaataan habka ugu habboon ee looga gudbi karo marxaladda kala guurka ah. 2. Bacdamaa Baarlamaanka sharafta leh ay 3dii February go’aamiyeen in muddada baarlamaanka lagu kordhiyo 3 sano, isla markaana uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka codsaday baarlamaanka inay dib-u-eegid ku sameeyaan go’aankaas, ka dib markii shacabka soomaaliyeed iyo caalamkaba ay muujiyeen welwelkooda ku aadan muddada 3da sano iyo iyada oo markii horeba ay aheyd in Xukuumadda laga sugo barnaamijka muddo kororsiga, ayey Xukuumaddu go’aamisay arrimaha soo socda:
3. Raissul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maalintii Khamiistii 21kii April u qoray warqad baarlamaanka kuna haggaajiyey Guddoomiyaha Baarlamaanka kana codsaday in maalinta Sabtiga ah ee 23ka April 2011 uu kulankaas wadatashiga labada hay’adood ah uu dhaco. 4. Golaha Wasiirada iyagoo arkaya baahida loo qabo in aragti mideysan laga yeesho sidii looga wada gudbi lahaa marxalladda kala guurka ah ayey u arkeen inay khasab tahay in wadatashi deg-deg ah lala yeesho baarlamaanka.
5. Golaha Wasiirada waxaa ka go’an sidii loo raadin lahaa maslaxadda ummadda soomaaliyeed oo geed dheer iyo mid gaabanba loogu fuuli lahaa, isla markaana si is-faham iyo is-afgarad leh loogu soo afjari lahaa xal u helidda xilliga kala guurka ah. 6. Walow uusan shirkii la filayey maanta qabsoomin, Xukuumaddu waxey weli rajo weyn ka qabtaa in kulankaas wadatashiga ah ee muhiimka u ah shacabka soomaaliyeed inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u qabsoomi doono, isla markaana guddiyada labada gole si saraaxad leh uga wada hadli doonaan sidii mowqif mideysan oo ay danta shacabka ku jirto loo gaari lahaa. Arrimaha Abaaraha ka jira Dalka: